January | 2014 | Myanmar Mp3 Album
သဉ္ဇာကျော် – ယုံလိုက်တော့ (2014) [Album] + [SongBook]
Quality: 320kbps MP3 ၀၁။ အပြုံးတစ်ပွင့်တည်းနဲ့ ၀၂။ ယုံလိုက်တော့ ၀၃။ မင်းမှမင်းပါပဲ ၀၄။ အမေ့ရင်ခွင် ၀၅။ ရူးရူးမူးမူး ၀၆။ အတူတူဆိုရင် (feat. ဥာဏ်လင်းအောင်) ၀၇။ လှည့်ကြည့်မနေနဲ့ ၀၈။ ကမ်းစပ်လေးမှာ ၀၉။ ငါချစ်တာ ၁၀။ ငိုနေမိပြီ ၁၁။ ဘာမှမထူးလဲ ၁၂။ အရင်းနှီးဆုံး [Download Whole Album – 95 MB] (Mediafire) [Download Whole Album – 95 MB] (Shared) [Download SongBook –7MB] (Mediafire)
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) သဉ္ဇာကျော် Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ရဲ​လေး​ – SWAG (2013) [The First Mini Album]
[Released: Dec 24, 2013. Genre: R&B. Quality: iTunes, 320kbps MP3 & MP4] M4A 01 ချစ်သူ.m4a 02 Swag.m4a 03 Swag.mp4 MP3 01 ချစ်သူ.mp3 02 Swag.mp3 03 Swag.mp4
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ရဲလေး Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
K-nox & Lily Tale – နှင်းပန်းပုံပြင် (2013) [Album]
256kbps MP3 ၀၁။ ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ရနံ့​ ၀၂။ ​ရေစက် ၀၃။ Queen ၀၄။ နှင်းပန်းပုံပြင် ၀၅။ My Life Is For You, Mom ၀၆။ ညကဗျာ ၀၇။ အ​ဖြေမရရှိ/a> ၀၈။ နာတယ် ၀၉။ ​ကြေမှာလား ၁၀။ Life Is So, Friend ၁၁။ Talk Talk Talk ၁၂။ ​ကြွေခါနီး ၁၃။ Birthday Song (Bonus Track) [Download Whole Album – 83 MB] (Mediafire) [Download Whole Album – 83 MB] (Shared) … Continue Reading →
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
ထူးအယ်လင်း – ရှင်သန်နေသူအတွက် (2013) [Album]
ထူးအယ်လင်း – ရှင်သန်နေသူအတွက် (Mp3) [Album] Here! Download Links via Mediafire ၀၁။ ​သေချာစဉ်းစား ၀၂။ ထာဝရခရီး​ ၀၃။ ​နေပါ​စေချစ်လို့ ၀၄။ ရှင်သန်နေသူအတွက် ၀၅။ နွေဦးအလွမ်း ၀၆။ မ​မေ့​နဲ့ ၀၇။ အချစ်လို့ခေါ်သလား​ ၀၈။ တမ်းတမိတိုင်း​ ၀၉။ စိတ်ကူး​ယဉ်အိမ် ၁၀။ ဘယ်ရင်ခွင်လဲ Special Thank & Credit – @Johnrekovan
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ထုးအယ်လင်း Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
VA – သက္ကရာဇ်ပိုင်ရှင် (2013) [Album]
၀၁။ သက္ကရာဇ်ပိုင်ရှင် – Lလွန်းဝါ ၀၂။ မဆုံးသောခရီး – ဖြူဖြူကျော်သိန်း ၀၃။ သခင့်အရိပ် – Hဂျိုးဇက်အောင် ၀၄။ စက္ကန့်မခြား – ငဲငယ်လေး ၀၅။ မြစ်တစ်မြစ်ရှိသေး၏ – မျိုးကြီး ၀၆။ လမ်းမှန်ရွေးချယ်ပါ – လားဖောဆက် ၀၇။ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောညတစ်ညအကြောင်း – ချစ်စမ်းမောင် ၀၈။ လွယ်လွယ်လေး – အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် ၀၉။ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ – စောဝင်းလွင် ၁၀။ ယော ၁၄:၁၂ – YC Sisters ၁၁။ ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းကြည့်ပါ – စံပီး ၁၂။ ပြောင်းလဲခြင်းတရား – ခင်ခင်မိုး ၁၃။ ကားတိုင်မှာ – ချစ်စမ်းမောင် ၁၄။ … Continue Reading →
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) အခွေ (တကိုယ်တော်) Myanmar Artist New Myanmar Albums 1 Comment
ပိုင်သက်ကျော် – စံပယ်ပုံပြင် (2006) [Album]
Quality: 256kbps MP3 ၀၁။ အကြင်နာသခင် ၀၂။ တို့ရွာကသူငယ်ချင်း ၀၃။ ထာဝရအမုန်းတွေကင်းပါစေ ၀၄။ ကြင်သူငယ်ချစ်ဦး ၀၅။ အားလုံးပျော်ပါစေ ၀၆။ လပြည့်ည ၀၇။ စလယ်ဝင်အိုးလေး ၀၈။ စံပယ်ပုံပြင် ၀၉။ ကျွန်တော့်မမ မန္တလာသူ ၁၀။ ရွှေထက်ရှားတဲ့အချစ် ၁၁။ အဖေ့ကျေးဇူး ၁၂။ သက်ဆိုင်သူသာသိပါစေ [Download Whole Album – 96 MB] (Mediafire) [Download Whole Album – 96 MB] (Shared)
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ပိုင်သက်ကျော် Myanmar Artist Leaveacomment
ပိုင်သက်ကျော် – လရောင်ပျိုးတဲ့ကုမုဒြာ (2007) [Album]
၀၁။ ချစ်သူကောင်းစားဖို့ ၀၂။ မီးခိုးချင်းတော့ပေါင်းရပါသည် ၀၃။ ရွှေအသည်းနဲ့လူ ၀၄။ လရောင်ပျိုးတဲ့ကုမုဒြာ ၀၅။ မှန်တာပြောရင်သစ္စာ ၀၆။ မြကိုစိန်နဲ့ခြယ် ၀၇။ အလွမ်းမင်းသားလေး ၀၈။ ပန်းပွင့်သလိုပြုံးစမ်းပါဦး ၀၉။ လျှော့မထွက်နဲ့ ၁၀။ ကြွားလောက်တဲ့ချစ်သူ ၁၁။ အချစ်ဆုံးရဲ့အမုန်းဝေဒနာ ၁၂။ နွေတိုင်းကြွေ [Download Whole Album – 90 MB] (Mediafire) [Download Whole Album – 90 MB] (Droplr)
မိုးသက်နိုင် – ချစ်လူမိုက်လေးမဟုတ်ရပါ (2008) [Album]
၀၁။ ချစ်လူမိုက်လေးမဟုတ်ရပါ ၀၂။ အလှပျက်မှာစိုး​ ၀၃။ ရှုပ်ကုန်ပြီ ၀၄။ မမေ့ခင်တွေ့ခွင့်ပေးပါ ၀၅။ တောင်ငူသူ ၀၆။ ဘဝဆိုတာ ၀၇။ အမုန်းတော်ခံ ၀၈။ ခရေပန်းများပွင့်ခဲ့ရင် ၀၉။ မဟောင်းသေးပါဘူး​ ၁၀။ သံယောဇဉ်စိမ်း​ ၁၁။ မမပုံပြင် ၁၂။ ရင်ထဲမှာနေ [Download Whole Album – 94 MB] (Droplr) [Download Whole Album – 94 MB] (Mediafire)
January 26, 2014 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) မိုးသက်နိုင် Myanmar Artist Leaveacomment
သစ်ဦးရဲ့ sample Track ပါ နားထောင်ပေးပါအုံး… Download
January 16, 2014 tharpauk အဆိုတော် (ကျား) ၀ါသနာရှင် အခွေများ Media Myanmar Artist Unreleased Album Leaveacomment
Thay Char P – One One ( Ka Ti Sa Kar Album)
January 16, 2014 mr.ozzy